LED linear light is also called linear wall washer light. It uses PCB hard boards to assemble circuit boards. The lamp beads can be with SMD or COB. Different components can be selected according to the specific situation. 8 common sense of LED linear lights, let you know more about linear lights...ဆက်ဖတ်ရန် »
2022 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ LED မီးထွန်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ စျေးကွက်အတိုင်းအတာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို လေ့လာခြင်း။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး သဘောတရားများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်အတူ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ LED မီးလုံးစျေးကွက်သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အလုံးစုံတိုးတက်မှုနှုန်းကို 10% ကျော်အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ forward-l အရ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အလင်းရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်အလင်းရောင်တွေအကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
စိမ်းလန်းသောအလင်းရောင်၏ အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံမှာ မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှုဆိုင်ရာ အညွှန်းလေးချက်ပါ၀င်သည်။ ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနည်းပြီး လုံလောက်သောအလင်းရောင်ရရှိရန် ဆိုလိုသည်မှာ...ဆက်ဖတ်ရန် »
LED မီးချောင်းများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ (၂)၊
စာတင်ချိန်- ဒီဇင်ဘာ- ၀၃-၂၀၂၁
6. တပ်ဆင်သည့်အခါ သပ်ရပ်သပ်ရပ်သော မျက်နှာပြင်ကို ဂရုပြုပါ၊ မီးခြစ်ကို မတပ်ဆင်မီ၊ တပ်ဆင်မျက်နှာပြင်ကို ဖုန်မှုန့် သို့မဟုတ် ဖုန်မှုန့်များ ကင်းစင်အောင် ထားပေးပါ၊ အလင်းအမြှေးပါးကို ကပ်ခြင်းမှ မထိခိုက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ တပ်ဆင်ပါ။ Light Strip ကို တပ်ဆင်သည့်အခါ၊ t ပေါ်ရှိ ထုတ်လွှတ်သည့် စာရွက်ကို မစုတ်ဖြတ်ပါနှင့်။ဆက်ဖတ်ရန် »
LED မီးချောင်းများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် သတိထားရမည့်အချက်များ (၁)
1. တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ခြင်းအား တားမြစ်ခြင်း LED အမြှောင်းအလင်းသည် အထူးလုပ်ဆောင်မှုနည်းပညာဖြင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်တွင် ဂဟေဆော်ထားသော LED မီးလုံးပုတီးစေ့ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ကို တပ်ဆင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းကို အားဖြည့်ပေးပြီး အလင်းရောင်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး အလှဆင်မီးထွန်းရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ပုံမှန် အမျိုးအစားများမှာ 12V နှင့် 24V ဗို့အားနိမ့်...ဆက်ဖတ်ရန် »
နေအိမ်အလင်းရောင်အတွက် စွမ်းအင်ချွေတာရေးနည်းလမ်းများနှင့် နည်းလမ်းများ
"မီးအိမ်" သည် အလင်းရောင်ပေးစွမ်းရုံသာမက အလှဆင်ခြင်းနှင့် အလှဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါရှိသည်။ သို့သော် ပါဝါမလုံလောက်ပါက မီးအလင်းရောင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်သင့်ပြီး မီးချောင်းများ၏ အလင်းရောင်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ခွဲဝေပေးသင့်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သာ စားသုံးသူများ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အိပ်ခန်းအတွက် မျက်နှာကျက်မီးတစ်ခုက မလုံလောက်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံဟာ အိပ်စက်ပြီး အိပ်ခန်းထဲမှာ ဒီထက်ပိုကြာကြာနေရမယ်။ ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ နေရာတစ်ခုအတွက် တတ်နိုင်သမျှ နွေးထွေးစွာ အလှဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပြီး အပန်းဖြေအနားယူဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာ ဖြစ်ပါစေ။ အခြေခံ အပြင်အဆင်အပြင်bအတွက် အရေးကြီးဆုံး...ဆက်ဖတ်ရန် »
အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန် လူများသည် အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်ဇယားကို ဖော်ပြရန်အတွက် အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန်နှင့် ညီမျှသော သို့မဟုတ် နီးစပ်သည့် ပြီးပြည့်စုံသော ရေတိုင်ကီ၏ ပကတိအပူချိန်ကို အသုံးပြု၍ အလင်းအရင်းအမြစ်၏ အရောင်ဇယား (အလင်းကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ လူမျက်စိမှမြင်ရသည့် အရောင် source) ငါ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဤအချက်သုံးချက်ကို မသိဘဲ LED လမ်းမီးမ၀ယ်ပါနှင့်။
LED Street Light ကို နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အချိန်အကြာကြီး ဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အရည်အသွေး လိုအပ်ချက်များ မမြင့်မားပါက လူများသာ စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိသေးသော်လည်း လမ်းမီး စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှာ ခက်ခဲသော အလုပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လမ်းမီးများ၏ တောက်ပမှုသည် အဓိက ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင်...ဆက်ဖတ်ရန် »
LED အလွန်ပါးလွှာသော panel panel မီးများ၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့အကဲဖြတ်မည်နည်း။
Core အစွန်အဖျား၊ စျေးကွက်တွင် LED အလွန်ပါးလွှာသော panel မီးများ၏အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုငါတို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ LED အလွန်ပါးလွှာသော panel light သည် Led စွမ်းအင်ချွေတာမီးလုံးများ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ပါးလွှာသောအသွင်အပြင်ကိုရရှိရုံသာမက ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အခြားမီးလုံးအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စီးပွားဖြစ်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များသည်ကွဲပြားသည့်လက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ စီးပွားဖြစ်မီးအလင်းအမှောင်ကိုစီးပွားဖြစ်နေရာများတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အခြားမီးလုံးအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထုတ်ကုန်များသည်ကွဲပြားသည့်လက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ စီးပွားရေးအလင်းရောင် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ LED မီးလုံး၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အပူအပူပျံ့နှံ့မှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ LED မီးခွက်၏အပူပျံ့နှံ့မှုသက်ရောက်မှုမကောင်းလျှင်ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အခန်းကဏ္သည် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
LED ultra-thi ၏အရည်အသွေးကိုမည်သို့အကဲဖြတ်မည်နည်း။
Core အစွန်အဖျား၊ စျေးကွက်တွင် LED အလွန်ပါးလွှာသော panel မီးများ၏အမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ ဘယ်ဟာကပိုကောင်းတဲ့အရည်အသွေးကိုငါတို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ LED အလွန်ပါးလွှာသော panel light သည် Led စွမ်းအင်ချွေတာမှု၏အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုသူဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
အခြားမီးလုံးအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စီးပွားဖြစ်အလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များသည်ကွဲပြားသည့်လက္ခဏာများနှင့်ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ စီးပွားဖြစ်မီးအလင်းအမှောင်ကိုစီးပွားဖြစ်နေရာများတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အခြားမီးလုံးအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ...
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ LED မီးလုံး၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အပူအပူပျံ့နှံ့မှုနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ LED မီးလုံး၏အပူဖြန့်ဖြူးမှုမကောင်းလျှင်၎င်းသည်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
ဦးဆောင် COB ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Tri-Proof Light Lighttip , Led နေရောင်ခြည် Rechargeable ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Philips က 3030 Led ရေလွှမ်းမိုးအလင်း, Ceiling Led Panel Light , Led Floodlight 30w ,